Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > မားလ်တီမီဒီယာ > ဗီဒီယို
Daw Aung San Suu Kyi at Lady Shri Ram College in Delhi (Part 3)	တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၀ နာရီ ၁၂ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	Daw Aung San Suu Kyi at Lady Shri Ram College in Delhi (Part 3) ...
Daw Aung San Suu Kyi at Lady Shri Ram College in Delhi (Part 2)	တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၀ နာရီ ၁၁ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	Daw Aung San Suu Kyi at Lady Shri Ram College in Delhi (Part 2) ...
Daw Aung San Suu Kyi at Lady Shri Ram College in Delhi (Part 1)	တနင်္လာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၉ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၀ နာရီ ၀၉ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	Daw Aung San Suu Kyi at Lady Shri Ram College in Delhi (Part 1) ...
Daw Aung San Suu Kyi honoured by LSR Students	တနင်္ဂနွေနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၃ နာရီ ၂၉ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	Daw Aung San Suu Kyi honoured by LSR Students ... Aung San Suu Kyi plants at Infosys campus	တနင်္ဂနွေနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၁ နာရီ ၃၉ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	Aung San Suu Kyi plants at Infosys campus ... burma refugee	စနေနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၃ နာရီ ၀၇ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	burma refugee ...
Prospect Burma	စနေနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၂ နာရီ ၄၄ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	Prospect Burma ...
Welcome To Prospect Burma Daw Suu	သောကြာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၄၉ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	Welcome To Prospect Burma Daw Suu ...
daw aung san suu kyi lady Shriram	သောကြာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၀၂ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	daw aung san suu kyi lady Shriram ...
Aung San Suu Kyi visits Burmese embassy in Delhi	ကြာသပတေးနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၂၃ နာရီ ၁၇ မိနစ်	မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	Aung San Suu Kyi visits Burmese embassy in Delhi ... « ရှေ့ဆုံးမျက်နှာသို့ ရှေ့တမျက်နှာသို့ 1234567 8910 နောက်တမျက်နှာသို့ နောက်ဆုံးမျက်နှာသို့ »	စာမျက်နှာ 1 စုစုပေါင်း 14	ကြော်ငြာ
We have 101 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved